संचय कोष के हो ? कसरी काम गर्छ ? - Tree Media News
tmednewsPosted on १३ पुष २०७४, बिहीबार
हालै कर्मचारी संचय कोषले व्यक्तिगत रुपमा पनि रकम जम्मा गर्न पाइने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, अब स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कोषमा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई समेत कोषको सदस्य बनाउने र रकम जम्मा गर्न प्रेरित गर्ने कोषको योजना छ ।
Previous Postअब घर बसीबसी कर तिर्न सकिने, सरकार डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्दैPrevious Post
Next Postकठ्याङ्ग्रियाे कर्णाली: डिजेल र पेट्राेल गाडीकाे ट्याङ्की मै जम्याे, जनजीवन कष्टकरNext Post